Golden Butterfly Hotel Beauty Salon & Spa | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Golden Butterfly Hotel Beauty Salon & Spa | Bahan
Golden Butterfly Hotel Beauty Salon & Spa
Golden Butterfly Hotel Beauty Salon & Spa ဆိုင်လေးသည် နံပါတ် ၁၂ ၊ ကိုမင်းကိုချင်းလမ်း ၊ ဗဟန်းမြို့နယ် တွင်တည်ရှိပါသည်။ ဆိုင်လေးသည် Golden Butterfly Hotel အပေါ်ထပ် ၆လွှာ တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော ဆိုင်လေးဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်လေးကတော့ မနက် ၁၁ နာရီမှ စတင်ဖွင့်လှစ်ကာ ည ၁၁နာရီ ထိဖြစ်ပြီး ပိတ်ရက်မရှိ နေ့စဉ်ဖွင့်လှစ်ပါသည်။ Golden Butterfly Hotel Salon & Spa ဆိုင်တွင် ရရှိနိုင်သော အရာများကတော့ ဆံပင်နှင့်ပက်သက်သော service အမျိုးမျိုး ၊ waxing service ၊ skin service ၊ massage ၊ facial & body massage ၊ nail spa နှင့် body spa တို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆိုင်တွင် Wi-Fi Free လည်းပေးထားပြီး ကားပတ်ကင်နေရာ ထားရှိဖို့အတွက်လည်း နေရာရှိပါသည်။ ဆိုင်အပြင်အဆင်လေးသည် စတိုင်ကျရိုးရှင်းပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ကာ လေကောင်းလေသန့်ရရှိသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆိုင်အတွင်းတွင် အအေးခန်းတပ်ဆင်ထားကာ ဆိုင်ရှိဆက်တင်တွေအားလုံးသည် ခေတ်မှီလှပပါသည်။ ဆိုင်ရှိ ၀န်ထမ်းတွေအားလုံးသည် အင်္ဂလိပ်စကား နှင့် ကိုးရီးယားစကား ကိုလည်းပြောနိုင်ကြပါသည်။ ဈေးနှုန်းတွေအားလုံးသည် သင့်တင့်ကာ ဆိုင်တွင် visa ၊ master အစရှိသည့် credit card မျိုးစုံနှင့်လည်း ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။ ဆိုင်တွင် အရောင်းရဆုံး service များကတော့ ဆံပင်ညှပ်ခြင်း ၊ ခေါင်းလျှော်ခြင်း ၊ လက်သည်းအရောင်ပြောင်းခြင်း ဆိုးခြင်း ဂျီးချွတ်ပေးခြင်း ၊ ခြေထောက်ဂျီးချွတ်ပေးခြင်း ၊ မျက်နှာနှင့် ပက်သက်ပြီး အမျိုးမျိုးလုပ်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ ဈေးနှုန်းတွေကတော့ body spa နှင့်ပက်သက်ပြီး တစ်နာရီကို ၁၅၀၀၀/ ၂၀၀၀၀ / ၁၀၀၀၀ ကျပ်တို့ဖြစ်ပြီး ၊ မိနစ်၉၀အတွက်ကိုတော့ ၁၅၀၀၀/ ၂၀၀၀၀/ ၃၀၀၀၀ ကျပ်တို့ဖြစ်ပြီး ၊ ၂နာရိစာအတွက်ကိုတော့ ၄၀၀၀၀ကျပ် ကျသင့်နိုင်ပါသည်။ ဆိုင်လေးကတော့ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ပေးဖို့အတွက် စောင့်ကြိုလျက်ရှိပါသည်။
06:17 PM - 06:17 PM ( ဘာမှမရှိပါ )
အနီးအနား ဗဟန်း၃လမ်း မှတ်တိုင်
Golden Butterfly Hotel Beauty Salon & Spa is located at No.12, Ko Min Ko Chin Road and Bahan Township. It is currently located at Golden Butterfly Hotel. The opening hour of the salon is from 11 AM to 11 PM and the salon is opened daily. Golden Butterfly Salon & Spa offering Hair Service, Waxing Service, Skin Service, Massage, Facial & Body Massage, Nail Spa and Body Spa. They serve Wi-Fi Free and Car Parking Area. The shop decoration is simple stylish, clean, hygiene environment, air conditioned inside and all the setting are modernized. All the staffs can speak English language and Korea language. All the prices are reasonable and they also accepted credit card such as Visa and Master. The bestselling point of the shop are Hair Cut, Hair Shampoo, Nail Color Change, Manicure, Pedicure and Mini Facial. For body spa prices start from 15000/ 20000/ 10000 kyats for one hour and 15000/ 20000/ 30000 for 90 minutes, 40000 kyats for2hour. It is suitable for those who would like to relax peacefully.
Cho Beauty Salon
Myanmar Origin (Shwegondaing )
Rosana Floral Service & Wedding Dress